musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Hotera & Resorts » Victoria House Resort & Spa Belize: Ultimate Thanksgiving Holiday Getaway
Belize Breaking Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Nhau Dzakanaka • misangano • nhau • Resorts • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau
Victoria House Resort & Spa, Belize, inzvimbo yekuhwina-mubairo yepamhenderekedzo yegungwa pamahombekombe makuru ezvitsuwa zveBelizean, Ambergris Caye, inodada nekupa izvo zvakakosha zveiyo yakakwana 2021 Thanksgiving getaway. Pamusoro penzvimbo dzakasiyana-siyana dzakagadzirwa zvine mutsindo, Victoria House Resort & Spa inopa huwandu hwezviitwa uye mafambiro, yekuzorodza spa marapirwo, uye kunyanya isingakanganwike Thanksgiving muparadhiso, inoyevedza yetatu-kosi yekudya.
Vashanyi vanogona kunakidzwa nemutambo weKutenda wakagadzirwa nevabiki nekunaka kunonaka kwekudonha.
Vafambi vanogona kutarisira kuongorora ruzhinji rwechitsuwa chezviitiko muBelize inoshamisa munaNovember mamiriro ekunze.
MuAmbergris Caye, tembiricha iri paavhareji 75°F, zvichiita kuti nzvimbo inodziya-mamiriro ekunze ive sarudzo yepamusoro yevafambi vanodzivirira bhururu wechando.
"Nzvimbo yedu inoshamwaridzana nemhuri isarudzo yakanaka kune chero munhu ari kutsvaga nzvimbo yekutenda isina kunetsekana gore rino," akadaro. Victoria House Resort & Spa General Manager, Janet Woollam. "Pamusoro pekunakidzwa nemabiko eKutenda akagadzirwa nevabiki vedu nerunako rwekudonha rwunonaka kwazvo, vafambi vanogona kutarisira kuona zviitiko zvechitsuwa ichi mumamiriro ekunze anoshamisa eBelize munaNovember."
Tembiricha yaNovember muAmbergris Caye - chimwe chezvitsuwa zvakanaka kwazvo muBelize, chiri makiromita makumi matatu nemashanu kubva kuBelize City - iri paavhareji 35 ° F, zvichiita kuti nzvimbo inodziya-yemamiriro ekunze ive sarudzo yepamusoro yevafambi vanodzivirira kutonhora kwechando.
"Mushure menguva refu yekugara munzvimbo uye nekushanda kubva kumba, vashanyi vachafara kuwana nzvimbo iyi inoshamisa, kwavanogona kunakidzwa nemazuva ekunaya kwezuva uye denga rebhuruu, uye kuzorora padivi redziva, snorkel, hove, kana scuba dive," akadaro Woollam. “Victoria House Resort & Spa inzvimbo yakakosha kuti tinyevenutse mweya wemwaka wezororo, uye tinotarisira kugamuchira vaenzi kunzvimbo yechitsuwa. "
Iine madziva asingaverengeki, mahombekombe egungwa, uye rwendo rwekushanya uye PADI-yakasimbiswa Fantasea Dive Shop, Victoria House Resort & Spa inopa chiyero chakakwana: nzvimbo ine runyararo umo vashanyi vanogona kunakidzwa nekuzorora kwakazara pamwe nekuwanda kwezviitiko zvinofadza zve. mhuri yose. Pamusoro pezviitwa zvakaita sekuchovha bhasikoro, kayaking, paddle boarding, snorkeling, uye kubata hove, vashanyi vanogona kuongorora temberi dzekare dzeMayan dziri pedyo, kuenda kuzere nepamusoro pemasango emusango azere neanoyevedza Black Howler Monkeys, kupinda murwendo rwemasango anonaya mvura, kana kushanyira World Heritage. coral reef yechiitiko chinoshamisa chekudhivha.
Nzvimbo dzekutandarira dzepasi rose dzinopa nharaunda yakanaka yekudzokera uye kuzorora mushure mezuva rekuongorora, vangave vashanyi vakasarudza villas inomira ine mamadziva ega ega akagadzirirwa mapoka madiki nemhuri, iyo inopisa Casitas, ocean view villas, kana makamuri akashongedzwa zvakanaka mune imwe nzvimbo. nhurikidzwa mbiri dzekolonial style chivakwa. Victoria House Resort & Spa inodadawo kuratidza a yakazara-sevhisi spa uye nzvimbo yekusimbisa muviri pamwe nematatu akasarudzika ezvekugadzirira zvechiitiko chese.
Inozivikanwa nekugadzirira zvinyoro, zvemhando yepamusoro zvekudya zvemugungwa nendiro zvine kumonyoroka kwenzvimbo, Victoria House Resort yekubika yakagadzirira menyu yakakosha yeKutenda, kutanga nesarudzo mbiri dzekosi yekutanga: a pear saladi ne fennel, walnuts, mazambiringa akaomeswa, uye chizi chebhuruu, kana yakakwira karoti ginger soup ine crispy nyama yenguruve dumbu, yakabikwa radish, uye caramelized apple. Yechipiri kosi, vashanyi vachange vaine sarudzo ye imba yakagadzirwa pasta yakazadzwa ne ricotta-uchi uye sage uye yakashumirwa negwayana rinonhuhwirira ragu, fresh snapper fillet yakagadzirwa nezvinonhuwira uye tangy cucumber yogurt sauce, kana yakagochwa turkey zamu kudyiwa negreen bean casserole uye matoti embambaira anonaka ane chizi chembudzi. Sticky toffee pudding inoshandiswa nevanilla gelato uye indulgent bourbon caramel sauce inopedza kudya kwezororo.
Inowanikwa kuburikidza nendege yemaminetsi gumi nemashanu kubva kuBelize City, Victoria House Resort inoita kuti zvive nyore kuronga mhemberero yeimwe-ye-yemhando munzvimbo inoshamisa gore rino.
Iri muBelize paAmbergris Caye, iyo huru yezvitsuwa zveBelizean Islands, Victoria House ingori mamaira maviri kumaodzanyemba kweSan Pedro Town inoyevedza. Imba yekutandarira inopa kuravira kwekushambidzika kweshangu kunoita kuti vaenzi vadzoke kune zvimwe, ine makamuri makumi mana nemaviri evaenzi kubva mumhando kubva padenga redenga casitas kusvika kumahombekombe emahombekombe ane madziva ega, makamuri ekudyara-matanho, uye ocean view villas. Iyo Palmilla Restaurant uye Admiral Nelson's Bar vane mukurumbira nekudya kwakanaka uye zvinwiwa zvinorumbidzwa neanoshamisa, sevhisi yemunhu. Kutarisisa kune zvakadzama nevashandi uye manejimendi zvakafanana kwakawana rukudzo kubva kune vezvenhau vekunze uye mibairo kubva kumasangano ane mukurumbira akadai saConde Nast Traveler, Conde Nast Johansens. Kuti uwane rumwe ruzivo, ndapota shanya Victoria-house.com.